News - Pee multi-oyi akwa anwụrụ extrusion akara
Pee multi-oyi akwa anwụrụ extrusion akara
Pee multi-oyi akwa anwụrụ extrusion akara nwere ike ime 2, 3, 4, 5 n'ígwé nke ọkpọkọ site multiple isi igwe compound extrusion.
Maka imepụta pipụ ọtụtụ-oyi akwa, ọtụtụ ọkwa, ihe ndị ọzọ, ọ na-esikwu ike ịmepụta. Layersdị dị iche iche ga-enwekwa ọdịiche dị iche iche. Maka ọkpọkọ oyi akwa atọ, e nwere ụdị abụọ. ABA na ABC chọrọ abụọ na atọ otu ịghasa extruders ka ha gbasaa. Maka akụrụngwa, ABC siri ike karịa yana akụrụngwa dị elu karịa ABA.
Pee multi-oyi akwa anwụrụ na-bụ-eji maka ọchịchị mmiri na drainage, ugbo ogbugba mmiri n'ubi, wdg site dị iche iche mejupụtara ihe na n'ígwé, ọ nwere ike belata na-eri, dịkwuo anụ ahụ ike ma na-amụba antioxidant.
N'ihi na ndị nkịtị mejupụtara anwụrụ mmepụta akara, nnukwu atụmatụ nke elu arụmọrụ mejupụtara anwụrụ mmepụta akara bụ elu arụmọrụ na ike izoputa. N'okpuru nkwenye nke otu ikike extrusion ahụ, ihe nkedo ahụ pere mpe, arụmọrụ ike dị ala, a na-echekwa saịtị na ọrụ ndị ọzọ.
E jiri ya tụnyere otu oge nke otu oge, mmepụta nke 60/30 nkịtị otu ịghasa extruder bụ naanị 100kg kwa awa, ebe ikike extrusion nke arụmọrụ 60/38 dị elu na-arụ ọrụ otu ihe ntanye karịrị 350 kg kwa awa, nke dakọtara na arụmọrụ zuru oke nke atọ na ọkara. Ike oriri bụ naanị oge 2.8 nke nke onye na-apụ apụ, na usoro oriri ike na-abawanye site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 25%. A na-ebelata ike oriri nke ukwuu, arụmọrụ ngwaahịa na-arụ ọrụ nke ọma, na oghere mmepụta na-ebelata nke ukwuu.
Pee multi-oyi akwa anwụrụ mmepụta akara nwere ike na-emepụta anwụrụ dayameta nke 20-1200mm, na nkọwa nke elu-arụmọrụ otu ịghasa extruder bụ tumadi 50/38, 60/38, 75/38, 90/38120/38150/38. ikike extrusion bụ 200-1200kg / h, na onye na-emepụta ọkụ bụ 55kw-550kw, ka o wee gboo mkpa ndị ahịa nwere ọkpọkọ ọkpọkọ dị iche iche.